होटल सञ्चालकसहित ३ पक्राउ : हेर्नुहोस – 24updatemedia
होटल सञ्चालकसहित ३ पक्राउ : हेर्नुहोस
विराटनगर : एक म’हिलालाई सा’मू’हि’क कर णी ग’रेको आ’रोपमा होटल सञ्चालकसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका-४ बलियामा रहेको श्रेष्ठ होटल एण्ड फेमिली होटलमा ३५ वर्षीय म’हिलामा’थि कर णी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
गत माघ ७ गते साँझ पीडित महिला इटहरीबाट बहिनीको घर फर्कने क्रममा गछिया खोलाको पुल नजिकबाट बहिनीको घर पुर्‍याइदिन्छु भनि गाडीमा चढाएर उक्त होटलमा लगी कर णी ग’रेको खुल्न आएको छ।
गत माघ ८ गते शनिबार उक्त घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीबाट ख’टिएको टोलीले होटल सञ्चालक अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र सुरज श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
घटनापछि फ’रा’र रहेका रामबहादुर नेपाली भनिने सुधान्सु दर्जीलाई भने गत ११ गते इलाम सूर्योदय नगरपालिका-१२ तीनघरेबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध कर णी मु’द्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको मोरङ प्रहरीले प्रवक्ता डिएसपी दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
३० वर्षकी एक महिलाले इटहरीस्थित एक घरमा शुक्रबारदेखि काम गर्न थालिन्। साँझ मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका गछियास्थित बहिनीको घर जाँदै थिइन्। गछिया खोला पुलनजिक ओर्लिएर एक युवकलाई उनले ‘लोकेसन’ सोधिन्। ती युवकले बहिनीको घर पु्र्याइदिने भनी गाडीमा राखेर लगे। तर, झुक्याएर होटलमा पु्र्याई राति तीन जनाले कर णी गरेको खुलेको छ।
सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ बलियास्थित श्रेष्ठ होटल एन्ड फेमीली लजको एउटा कोठामा ब ‘न्धक बनाएर शुक्रबार राति महिलामा’थि कर णी भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उक्त घटनाबारे बेलैमा प्रहरीलाई जानकारी नदिएको, पीडित र उनका आफन्तलाई दु’व्र्य’व’हार गरेको पाइएको डीएसपी मुकारुङले बताए। ‘होटलको एउटा कोठामा थु’ने’र रा’तभ’र महिलालाई तीन जनाले पालैपालो कर णी गरेको खुलेको छ’, मुकारुङले भने, ‘प्रहरीले घटनाका बारेमा शनिबार दिउँसो १ बजेतिर मात्रै थाहा पायो।’
र’क्त’स्रा’वका कारण पीडितको अवस्था ग’म्भीर छ। उनी राम्ररी बोल्न सक्दिनन्। उनलाई कोसी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अस्पतालकी प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रिभा केसीले र’क्त’स्रा’व रोक्ने प्रयास जारी रहेको बताइन्। ‘र’क्त’स्रा’व अ’त्य’धि’क भ’इरहेको छ। र’ग’त धेरै ब’गे’का कारण र’क्त’चा’प पनि निक्कै कम भएर गयो,’ उनले भनिन्, ‘पीडितको उपचारमा कुनै कमजोरी हुन नदिन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। अवस्था निक्कै ग’म्भीर छ।’
डा. केसीका अनुसार पीडित महिलाको ‘यौ’नअं’ग क्ष’ति’वि’क्ष’त छ। शरीरका विभिन्न भागमा पनि चो’ट’प’ट’क छ। ‘यौ’नअं’ग’मा ठू’लो अ’स’र पुगेका कारण सिलाइ गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘अरू थप समस्याका विषयमा परीक्षण गरेर रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।’
पीडितका ४ वर्ष र १७ महिनाका दुई छोरी छन्। आफन्तका अनुसार पहाडबाट पीडित महिला परिवारसहित गत असोजमा बेलबारी बसाइँ आएकी हुन्। पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। उनी नाबालिका छोरीलाई बहिनीको जिम्मा लगाएर काममा जान थालेकी थिइन्। बहिनीको घर जान खोज्दा आरोपितले प्रदेश २–०१–००१ च २२७ नम्बरको गाडीमा राखेर होटल पु्र्याएको पाइएको छ।
‘विभिन्न ठाउँमा घुमाउँदै ती युवाले साँझ ७ बजेतिर महिलालाई होटलमा पु्र्याएछन्। एकछिनमा बहिनीको घर पु्र्याइदिन्छु भन्दै केही खान दिएर राखेको पाइयो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘खानेकुरा दिएपछि महिला बे’हो’स भइछन्। बे’हो’स बनाउने वस्तु खान दिएर र सुँ’घाएर होटलको कोठामा लगेर तीन जनाले नै पालैपालो कर णी गरेको खुलेको छ।’ सुरुमा गाडीमा राखेर लैजाने युवकले, पछि अर्जुन र मनोजले कर णी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
पीडित महिलाले शुक्रबारदेखि नै सुनसरीको इटहरीस्थित एउटा घरमा काम गर्न सुरु गरेकी थिइन्। काम सकेपश्चात सुन्दरहरैँचाकै गछियास्थित बहिनीको घरमा फर्कदै गरेको अवस्थामा उनलाई घटनामा सं’लग्नमध्ये रामबहादुरले शुक्रबार साँझ ६ बजेतिर गाडीमा राखेर गछिया लगेका थिए। उक्त घटनापछि रामबहादुर फ’रा’र रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
शुक्रबार राती भएको घटनाको बारे आफूलाई शनिबार बिहान मात्रै थाहा भएको पीडितकी बहिनीले बताइन्। घटना भएको थाहा पाएपछि घटनास्थल पुग्दा कोठा र ओछ्यान अ’स्तव्य’स्त अवस्थामा पाइएको उनले बताइन्।
दिदीलाई उपचारका लागि लैजान हा’रगु’हा’र गर्दा आफूमाथि नै दु’र्व्य’व’हा’र भएको उनले गुनासो गरिन्। ‘दिदीलाई उपचारका लागि हा’र’गु’हा’र गर्दा ममाथि नै दु’र्व्य’व’हा’र गरियो,‘उनले सुनाइन्, ‘प्रहरीलाई खबर गर्छु भनेपछि मात्रै बल्ल उपचारका लागि होटल मालिक तयार भएका थिए।’
‘रातभरको पीडाले दिदी बे’हो’स हुनुभएछ। बिहान ८ बजेतिर ब्युँझिएपछि होटलमा राखेर मलाई कर णी गरे भन्दै फोन गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘घटना सुनेपछि म उक्त होटलमा पुगेँ। र’ग’तको आ’हा’लमा डु’बे’को होटलको कोठा र ओछ्यानमा दिदीलाई अ’चेत अवस्थामा पाएँ।’
कोठा र ओछ्यान र’क्ता’म्य पाइएको उनले सुनाइन्। ‘दिदी त्यहीँ ल’डि’र’हेकी थिइन्। त्यस्तो अवस्था देखेपछि मैले केही सोच्नै सकिनँ। उपचारका लागि लैजान हा’रगु’हा’र गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि होटल सञ्चालकका भाइ र होटलमा काम गर्ने युवती आएर ममाथि ‘दु’व्र्य’व’हा’र गर्न थाले। प्रहरीलाई खबर गर्छु भनेपछि गाडीमा राखेर उपचार गर्न लैजान तयार भए।’
उपचारमा ल्याउने क्रममा र’ग’त’ले गाडीको सिट नै र’क्ता’म्य’ भएको उनले बताइन्। ‘गाडीमा पनि धेरै र’क्त’स्रा’व भ’यो। दिदीको अवस्था झन् बि’ग्रँदै गयो। उहाँ बोल्नै छाड्नुभयो। वा’न्ता पनि गर्नुभयो,’ बेडमा राखिएकी दिदीको अवस्था देखेर उनले रुँदै भनिन्, ‘जसोतसो अस्पताल ल्याएर भर्ना गरिएको छ। उपचार सुरु भए पनि अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता थपिएको छ।’
Previous कोरियाबाट श्रीमानले पठाएको ८० लाख लिएर श्रीमती सम्पर्क विहिन भएपछी…
Next चर्चित पत्रकार सन्तोश देउजाले दिए श्रीमतिलाई यती ठुलो उपहार , भाबुक हुँदै लेखे मन छुने स्टाटस